Ixabiso eliphantsi lokungomisi kabini iRoller extrusion Compound Fertilizer Granulator Umatshini wabathengisi kunye neFektri | YiZheng
Ukungomisi Isongezo sokuqengqeleka seComputer Extrusion Compound inokulungelelaniswa okuphezulu kwimathiriyeli ekrwada, inokuvelisa ukusuka kwi-2.5mm ukuya kwi-20mm granules kunye namandla e-granule alungile, inokuvelisa iintlobo ezahlukeneyo zoxinaniso kunye neentlobo (kubandakanya isichumiso sezinto eziphilayo, isichumiso esingaphiliyo, isichumiso sebhayoloji, isichumiso semagnethi, njl.
Yintoni iRoll Extrusion Compound Fertilizer Granulator?
Inkqubo ye- Isongezo sokuqengqeleka seComputer Extrusion Compound umatshini ngumatshini we-granulation owomileyo kunye nezixhobo ze-granulation ezomileyo. Inezinto eziluncedo zobuchwephesha obuphambili, uyilo olusengqiqweni, ubumbano lwento, ubutsha kunye nokusetyenziswa, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi. Inokuxhasa izixhobo ezihambelanayo, yenze umgca wemveliso encinci ukufezekisa amandla athile okuqhubeka, kwimveliso yoomatshini.
Umgaqo wokuSebenza we-Roll extrusion Compound Fertilizer Granulator
Isichumisi seRoll extrusion Compound Isichumisi umatshini ungowomzekelo wesiliphu sokukhuphela, yamkela itekhnoloji yokuqengqeleka eyomileyo yokucinezela izinto ze powdery zibe ngamasuntswana. Isixhobo sokushicilela esomileyo esomileyo ikakhulu sixhomekeke kwindlela yoxinzelelo lwangaphandle lokunyanzela izinto ezihamba kwisithuba phakathi kweeroller ezimbini eziguqukayo zokucinezela zibe ngamasuntswana. Ngexesha lenkqubo yokuqengqeleka, ukuxinana kwamasuntswana okwenyani kungonyuswa nge-1.5 ~ amaxesha ama-3 ukuhlangabezana nemfuno yamasuntswana athile. Izinga le-granulation kulo matshini liphezulu, lisetyenziswa kakhulu kwi-granulation yesichumisi esimbaxa, amayeza, umzi-mveliso weekhemikhali, ukutya, amalahle, isinyithi kunye nezinye izinto eziluhlaza, kwaye unokuvelisa iintlobo ezahlukeneyo zoxinaniso, iintlobo ezahlukeneyo (kubandakanya isichumiso semvelo, isichumiso esingaphiliyo, isichumiso sebhayoloji, isichumiso esisebenza ngemagnethi, njalo njalo.
Kutheni usikhetha umatshini wokuchumisa isicatshulwa somdongwe?
Umzi mveliso wethu uzinikele ukubonelela izixhobo zezinto eziphilayo kunye nezichumisi kunye nenkonzo yetekhnoloji kubasebenzisi, kubandakanya uyilo ngokubanzi loyilo lwesiphumo sonyaka seetoni eziyi-1-100,000 ngaphandle kokomisa izixhobo, ukuveliswa kweeseti ezipheleleyo zesikhokelo sobuchwephesha, ukugunyazisa, zonke kwinkonzo enye.
Okwangoku, emva kokuphuhliswa kweminyaka emininzi yamava ekuveliseni izixhobo ezininzi zomatshini wokucola isichumisi, ukwamkela izinto ezikumgangatho ophezulu zokulwa umhlwa, ukwenziwa ngononophelo, kunezibonelelo zokubonakala okuhle, ukusebenza ngokulula, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, Inkonzo ende, inqanaba eliphezulu lokutya okuziinkozo, umatshini wegranule wasekhaya oqhubele phambili, iimveliso kwilizwe liphela, olu luhlu lwegranulator lusebenza kuluhlu olubanzi.
Uncedo lwe-Extrusion Compound Fertilizer Granulator Machine
1. Ngaphandle kwezongezo, umgubo owomileyo ugalelwe ingqolowa ngokuthe ngqo.
2. Amandla e-Granular anokuhlengahlengiswa ngokulungelelanisa uxinzelelo lwe-roller, amandla olawulo lweemveliso zokugqibela.
3. Ukusebenza kwemijikelezo ukufezekisa imveliso eqhubekayo.
4.Izixhobo ziyinyanzelo yokucinezela ukubumba ngoxinzelelo loomatshini, ngaphandle kwazo naziphi na izongezo, ubunyulu bemveliso buqinisekisiwe.
5. I-powders eyomileyo igalelwe i-granulated ngqo ngaphandle kwenkqubo yokulandelela eyomileyo, inkqubo esele ikho yemveliso kulula ukuhlangana kunye notshintsho.
6. Amandla e-Granular aphezulu, xa kuthelekiswa nezinye iindlela ze-granulating, ukuphuculwa koxinano lwesambuku esithambileyo kubalulekile, ngakumbi kumsitho apho kunyusa inani lokuqokelelwa kwemveliso.
7. Uluhlu olubanzi lweemathiriyeli ekrwada zingasetyenziselwa ukwenza i-granulating, amandla e-granular anokulungiswa ngokukhululekileyo ngokwezinto ezahlukeneyo.
8.Ubume beCompact, ulondolozo olulula, ukusebenza okulula, inkqubo emfutshane, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ukusebenza kakuhle, inqanaba lokungaphumeleli okuphantsi.
9. Lawula ungcoliseko lokusingqongileyo, ukunciphisa iindleko zenkunkuma kunye neepakethe zokupakisha, kunye nokuphucula amandla ezothutho lwemveliso.
10. Izinto eziphambili zokuhambisa zisebenzisa izinto eziphezulu zealloy. Insimbi engenasici, i-titanium, i-chromium kunye nezinye i-alloys zomhlaba eziphucule kakhulu ukumelana nokunxiba, ukumelana nokubola, ubushushu obuphezulu kunye namandla oxinzelelo, ukuze lo matshini ube nobomi benkonzo ende.
Isishwankathelo sokungamiswa kabini kweRoller Extrusion Compound Umanyolo wemveliso yokulinganisa
I-YiZheng Heavy Machinery Co., LTD inokubonelela ngenkqubo yoyilo kunye nokubonelela ngenkqubo epheleleyo yokuvelisa isichumisi.
Oku Akukho Mkhuba wokomisa kabini uMatshini wokuGcina isichumiso somgquba ungavelisa isichumisi esimbaxa esiphakamileyo, esiphakathi kunye nesisezantsi kwizityalo ezahlukeneyo. Nge granulator kabini ukuvelisa granules, umgca wemveliso ayifuni inkqubo yokomisa, ukuba utyalo-mali oluncinci kunye nokusetyenziswa kwamandla aphantsi. Iiroller zokushicilela zegranulator ziyilelwe ukwenza iimilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu bezinto. Umgca ubandakanya ukubethelwa komatshini okuzenzekelayo, ukuhambisa ibhanti, umxube weepani, isinxibelelanisi sepani, iigram granulators, umatshini wokujonga ojikelezayo, imveliso egqityiweyo yokugcina, kunye nomatshini wokupakisha ngokuzenzekelayo. Sikulungele ukubonelela ngezixhobo zokuchumisa ezinokuthenjwa kunye nezona zisombululo zifanelekileyo kubathengi bethu abahloniphekileyo.
Akukho Mkhuba wokomisa kabini uMatshini wokuGcina isichumiso somgquba Inkqubo yokuhamba:
Imathiriyeli ekrwada (i-static batching machine) → Ukuxubeka (Umxhubi we-Disc) → i-Granulating (i-extrusion granulator) → Ukuhlola (umatshini wokujonga igubu ojikelezayo) → Ukwaleka (umatshini wokujikeleza wedrama) → iimveliso ezigqityiweyo zokupakisha (umatshini ozenzekelayo wobungakanani) → Ukugcina (ukugcina indawo epholileyo neyomileyo)
ISAZISO: Lo mgca wemveliso wenzelwe ireferensi yakho kuphela.
Isongezo seRoll ye-Extrusion Compound Fertilizer Granulator yeVidiyo
Ukukhethwa kweModeli yokuGcina isichumiso seComputer Extrusion
Particle Ububanzi (mm)
6-20N (Amandla otyumkileyo)
Egqithileyo Umatshini oziqhubela ngokwakho oguqula umatshini ojikajika
Okulandelayo: Uhlobo olutsha lwe-Organic Chumisa i-Granulator
Intshayelelo Yintoni umatshini wokuxuba we-BB? Umatshini wokucoca we-BB wezinto zokufakelwa ngenkqubo yokuphakamisa ukondla, umgqomo wentsimbi uyehla usihla ekutyeni izinto, ezikhutshelwa ngqo kumxube, kunye nomxube wesichumisi se-BB ngokusebenzisa indlela ekhethekileyo yangaphakathi yokujija kunye nesakhiwo ...